မနျစီးတီး 0:2 မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ ပှဲအပွီး ထမငျးလုံးစီရငျး မှတျမှတျရရ ထုတျနှုတျပွောစရာ ၇ ခကျြ – Sports A2Z
မနျစီးတီး 0:2 မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ ပှဲအပွီး ထမငျးလုံးစီရငျး မှတျမှတျရရ ထုတျနှုတျပွောစရာ ၇ ခကျြ
ခွစှေမျးကောငျးတှကေို ဆကျတိုကျပွပွီး ၂၁ ပှဲဆကျ အနိုငျခညျြးသီးသနျ့ကစားလာခဲ့တဲ့ မနျစီးတီးက ယူနိုကျတကျကို အရေးနိမျ့ခဲ့တာက ရညျမှနျးခကျြကွီးကွီးထားတဲ့ ဂှာဒီယိုလာအတှကျ အထိနာခဲ့ပါတယျ။ ဥရောပထိပျသီးလိဂျ ၅ ခုမှာ နိုငျပှဲဆကျအမြားဆုံးစံခြိနျကို တငျခြိတျဖို့ မနျစီးတီးအသငျးကို တောကျလြှောကျဆှဲတငျလာပွီး ၂၅ ပှဲပွညျ့ရငျ ဂှာဒီယိုလာ လကျမထောငျနိုငျမယျ့အရေးကနေ ကငျးကှာသှားခဲ့တယျ။ ယူနိုကျတကျက ဒါကိုကြိုးပကျြသှားစခေဲ့တယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ ရပျတနျ့မရလောကျအောငျ ခွစှေမျးထိုးတကျနခြေိနျမှာ မနျစီးတီးတို့ ရငျနာခဲ့ရတယျ။ ဒီပှဲမှာ အသငျးရဲ့ခွစှေမျးဟာ မြှျောလငျ့ထားသလောကျ ထကျမွကျခဲ့ခွငျးမရှိတာကိုလညျး တှခေဲ့ရတယျ။
ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့အတှကျ အသကျဝဝရှုနိုငျသှားတဲ့ ယူနိုကျတကျ
ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ဒီနမေ့နျခကျြစတာဒါဘီပှဲစဉျက သရေေးရှငျရေးပှဲစဉျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ အနိုငျကနျဖို့ကလှဲရငျ ရှေးစရာမရှိတဲ့ အခွအေနပေါ။ အကွောငျးကတော့ အဆငျ့ ၅ နရောက အဲဗာတနျအသငျးကို ၈ မှတျဖွတျတောကျထားနိုငျခဲ့ရငျ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ တနရောစာအတှကျ သင်ျခြာနညျးအရ ပိုစိတျခရြပါတယျ။ ယူနိုကျတကျတို့ ဒါကိုလုပျနိုငျခဲ့တယျ။ ယူနိုကျတကျကို ၁၄ မှတျဖွတျထားတဲ့ မနျစီးတီးအသငျးက အနိုငျ၊ အရှုံး မရှေး အမှတျပေးဇယားထိပျ ပိုနမွေဲကြားနမွေဲဖွဈလို့ ကိုယျ့နရောကိုယျဆုပျကိုငျဖို့ အမှတျပိုပွီး လိုအပျနတေဲ့ ယူနိုကျတကျက လိုအပျတဲ့အတိုငျး ဖွဈအောငျလုပျနိုငျခဲ့တယျ။ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲကို အနီရောငျလှမျးခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျက စိတျဓာတျပိုငျးဆိုငျရာအရ ယုံကွညျခကျြမွငျ့တကျသှားခဲ့စတောဖွဈလို့ ဒီအရှိနျနဲ့ ရာသီလကျကနျြမှာ ဘာတှလေုပျပွဦးမလဲ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ခငျြစရာပါ။
အကွောငျးကတော့ မနျစီးတီး တိုကျစဈမှူး စတာလငျက အသငျးကွီး၊ အသငျးငယျမရှေး အသငျးတိုငျးနီးပါးကို ဂိုးတှေ မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျ သှငျးယူထားပမေယျ့ ယူနိုကျတကျနဲ့ တှဆေုံ့တိုငျးမှာတော့ ရမွှေလေိုဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ခွစှေမျးက ယူနိုကျတကျကြိနျစာမိနသေလို မွငျခဲ့ရတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ ပွိုငျပှဲစုံ ၂၃ ပှဲထိပျတိုကျတှဆေုံ့ခဲ့ရာမှာ လကျရှိအခြိနျအထိ တဂိုးမှ မသှငျးယူနိုငျခဲ့ခွငျးက ထူးခွားတဲ့အကွောငျးအရငျးတရပျဖွဈနတေယျ။ ဒီပှဲမှာလညျး သူဟာ ဝမျဘဈဆာကာရဲ့ အိပျကပျထဲမှာ ပိတျမိနခေဲ့တယျလို့သာ စိတျမသကျမသာစှာ ဆိုရမှာပါ။
နိဗ်ဗာနျဘုံကို ရောကျလာတဲ့ လုချရှော
ပွီးခဲ့တဲ့နှဈပိုငျးတှမှော တောကျလြှောကျ အဝဖေနျခံခဲ့ရတဲ့ ယူနိုကျတကျဘယျအစှနျလူ လုချရှောက ပရိသတျမြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ ခွစှေမျးမြိုး မပွသနိုငျလို့ ဘောလုံးဝဖေနျသူတှရေဲ့ အကွိမျကွိမျထိုးနှကျမှုကို ခံခဲ့ရတယျ။ အင်ျဂလနျရဲ့ အကောငျးဆုံး နောကျခံအစှနျလူစာရငျးထဲကိုပေါကျဖို့ သကျသပွေစရာတှေ ရှိနသေေးတယျလို့ ထောကျပွခံခဲ့ရတယျ။ ဒီရာသီမှာတော့ လုချရှောက ဒါတှကေိုကြျောဖွတျလာခဲ့တယျ။ နိဗ်ဗာနျဘုံကို ရောကျနတေဲ့အလား ယုံကွညျခကျြအပွညျ့နဲ့ တညျတညျငွိမျငွိမျပဲ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ ထိထိရောကျရောကျ ကစားနတေယျ။ သူ့ရဲ့ ဒီရာသီခွစှေမျးက ကွှတေကျလှနျးနတောက ကစားသမားဘဝတလြှောကျ အကောငျးဆုံးခွစှေမျးအဖွဈ အညှနျးခံထားရတယျ။ ခံစဈကို အလုံခွုံဆုံးဖွဈစသေလို တိုကျစဈကိုလိုကျပါပွီး ပွိုငျဘကျအသငျးကို ခွိမျးခွောကျမှုတှေ အကွိမျကွိမျ ပွုလုပျတယျ။ အောငျမွငျတယျ။ အသငျးကိုဟနျခကျြညီစတေယျ။ ယူနိုကျတကျရဲ့ ဒုတိယဦးဆောငျဂိုးကို သူသှငျးယူသှားပုံက မနျစီးတီးကို ငိုကျကသြှားစခေဲ့တယျ။ လကျခုပျတီးခြီးကြူးခငျြစရာကောငျးခဲ့တယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျဖလား မနျစီးတီးလကျထဲက လုယူဖို့ ယူနိုကျတကျ စဉျးစားနလေား?
ဒီပှဲအပွီးမှာ မနျစီးတီးအသငျးက အမှတျပေးဇယားထိပျကနေ ဆကျလကျဦးဆောငျနပွေီး အဆငျ့ ၂ နရောက ယူနိုကျတကျကို ၁၁ မှတျဖွတျထားတယျ။ ကစားရမယျ့ လကျကနျြပှဲက ၁၀ ပှဲကနျြတယျ။ ဘာမဆိုဖွဈသှားနိုငျတဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့အစဉျအလာက ရှိနလေို့ ယူနိုကျတကျပရိသတျတှအေတှကျ မြှျောလငျ့စရာဖွဈနတေယျ။ ပှဲစဉျဇယားမှာတော့ မနျစီးတီးက လကျကနျြ ၁၀ ပှဲမှာ ကွီး ၆ ခွောကျကွီးထဲက ၁ သငျးနဲ့သာ တှဆေုံ့ဖို့ ရှိတော့တယျ။ မနျစီးတီးဘကျကကွညျ့ရငျတော့ ဒီလိုအနအေထားမြိုးမှာ ခွခြေျောသှားဖို့ဆိုတာက မဖွဈနိုငျလှနျးလောကျအောငျ အလှမျးကှာတယျလို့ ဆိုရမယျ။ မနျစီးတီးအနနေဲ့ ခနျြပီယံစိတျကွီးဝငျပွီး ပေါ့ပေါ့တနျတနျ ကစားသှားမယျဆိုရငျတော့ ဂှာဒီယိုလာအခကျ ယူနိုကျတကျအခကျြဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ပှဲခြိနျ ၇၃ မိနဈမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ အားထားရတဲ့ တိုကျစဈမှူး မားကပျဈ ရကျရျှဖို့ဒျ ဒဏျရာကွောငျ့ထှကျခှာခဲ့ရတယျ။ မနျစီးတီးကို အပွိုငျလိုကျပွီး ဖိအားပေးဖို့ ကွိုးစားလာနိုငျခွရှေိနတေဲ့ ယူနိုကျတကျအတှကျ ထိုးနှကျခကျြတခုဖွဈလာမလားဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ ဆိုးလျရှားရဲ့ အဆိုအရတော့ ယူနိုကျတကျပရိသတျအတှကျ ခတ်ေတစိတျသကျသာရစခေဲ့တယျ။ ဒဏျရာကို စဈဆေးမှုမပွုလုပျရသေးပမေယျ့ ပွငျးထနျတဲ့ ဒဏျရာမဟုတျဘဲ အသေးစားထိခိုကျမှုသာဖွဈပါစလေို့ မြှျောလငျ့ထားကွောငျး ပှဲအပွီးမှာဆိုခဲ့တယျ။ ယူနိုကျတကျမှာ ဒဏျရာလူစာရငျး အတျောလေးမွငျ့တကျလာတာက သတိထားစရာပါ။ ဒါ့အပွငျ ယူနိုကျတကျဟာ လကျရှိဥရောပထိပျသီးလိဂျ ၅ ခုမှာ အဝေးကှငျးရှုံးပှဲမရှိတဲ့ တသငျးတညျးသောအသငျးဖွဈလာတယျ။
ယူနိုကျတကျရဲ့ မှတျမှတျသားသား စံခြိနျမှတျတမျး
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပထမပိုငျးအပွီးမှာ ဦးဆောငျထားနိုငျတဲ့ နောကျဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျ ၁၀၃ အထိကို ရှုံးပှဲမရှိဘူးလို့ သိရတယျ။ ပထမပိုငျးနိုငျတဲ့ပှဲတိုငျးမှာ ၉၁ ပှဲနိုငျပွီး ၁၂ ပှဲကို ပှဲအပွီးမှာ သရကေထြားတယျ။ ဒါကအံ့ခြီးလောကျတဲ့ မှတျတမျးမြိုးဖွဈနတေယျ။ နောကျတခကျြက ဆိုးလျရှားက ယူနိုကျတကျအသငျးသမိုငျးမှာ မနျစီးတီးကို အဝေးကှငျး ၃ ပှဲဆကျ နိုငျတဲ့ ပထမဆုံးနညျးပွဖွဈလာတယျလို့ သိရပါတယျ။
ခြေစွမ်းကောင်းတွေကို ဆက်တိုက်ပြပြီး ၂၁ ပွဲဆက် အနိုင်ချည်းသီးသန့်ကစားလာခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးက ယူနိုက်တက်ကို အရေးနိမ့်ခဲ့တာက ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားတဲ့ ဂွာဒီယိုလာအတွက် အထိနာခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပထိပ်သီးလိဂ် ၅ ခုမှာ နိုင်ပွဲဆက်အများဆုံးစံချိန်ကို တင်ချိတ်ဖို့ မန်စီးတီးအသင်းကို တောက်လျှောက်ဆွဲတင်လာပြီး ၂၅ ပွဲပြည့်ရင် ဂွာဒီယိုလာ လက်မထောင်နိုင်မယ့်အရေးကနေ ကင်းကွာသွားခဲ့တယ်။ ယူနိုက်တက်က ဒါကိုကျိုးပျက်သွားစေခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ရပ်တန့်မရလောက်အောင် ခြေစွမ်းထိုးတက်နေချိန်မှာ မန်စီးတီးတို့ ရင်နာခဲ့ရတယ်။ ဒီပွဲမှာ အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းဟာ မျှော်လင့်ထားသလောက် ထက်မြက်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက် အသက်ဝဝရှုနိုင်သွားတဲ့ ယူနိုက်တက်
ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဒီနေ့မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲစဉ်က သေရေးရှင်ရေးပွဲစဉ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အနိုင်ကန်ဖို့ကလွဲရင် ရွေးစရာမရှိတဲ့ အခြေအနေပါ။ အကြောင်းကတော့ အဆင့် ၅ နေရာက အဲဗာတန်အသင်းကို ၈ မှတ်ဖြတ်တောက်ထားနိုင်ခဲ့ရင် ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် တနေရာစာအတွက် သင်္ချာနည်းအရ ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်တို့ ဒါကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ယူနိုက်တက်ကို ၁၄ မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းက အနိုင်၊ အရှုံး မရွေး အမှတ်ပေးဇယားထိပ် ပိုနေမြဲကျားနေမြဲဖြစ်လို့ ကိုယ့်နေရာကိုယ်ဆုပ်ကိုင်ဖို့ အမှတ်ပိုပြီး လိုအပ်နေတဲ့ ယူနိုက်တက်က လိုအပ်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲကို အနီရောင်လွှမ်းခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်က စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ယုံကြည်ချက်မြင့်တက်သွားခဲ့စေတာဖြစ်လို့ ဒီအရှိန်နဲ့ ရာသီလက်ကျန်မှာ ဘာတွေလုပ်ပြဦးမလဲ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ချင်စရာပါ။
အကြောင်းကတော့ မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှူး စတာလင်က အသင်းကြီး၊ အသင်းငယ်မရွေး အသင်းတိုင်းနီးပါးကို ဂိုးတွေ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် သွင်းယူထားပေမယ့် ယူနိုက်တက်နဲ့ တွေ့ဆုံတိုင်းမှာတော့ ရေမြွေလိုဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းက ယူနိုက်တက်ကျိန်စာမိနေသလို မြင်ခဲ့ရတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ ၂၃ ပွဲထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ လက်ရှိအချိန်အထိ တဂိုးမှ မသွင်းယူနိုင်ခဲ့ခြင်းက ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရင်းတရပ်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီပွဲမှာလည်း သူဟာ ဝမ်ဘစ်ဆာကာရဲ့ အိပ်ကပ်ထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့သာ စိတ်မသက်မသာစွာ ဆိုရမှာပါ။
နိဗ္ဗာန်ဘုံကို ရောက်လာတဲ့ လုခ်ရှော
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေမှာ တောက်လျှောက် အဝေဖန်ခံခဲ့ရတဲ့ ယူနိုက်တက်ဘယ်အစွန်လူ လုခ်ရှောက ပရိသတ်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ခြေစွမ်းမျိုး မပြသနိုင်လို့ ဘောလုံးဝေဖန်သူတွေရဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ထိုးနှက်မှုကို ခံခဲ့ရတယ်။ အင်္ဂလန်ရဲ့ အကောင်းဆုံး နောက်ခံအစွန်လူစာရင်းထဲကိုပေါက်ဖို့ သက်သေပြစရာတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ ထောက်ပြခံခဲ့ရတယ်။ ဒီရာသီမှာတော့ လုခ်ရှောက ဒါတွေကိုကျော်ဖြတ်လာခဲ့တယ်။ နိဗ္ဗာန်ဘုံကို ရောက်နေတဲ့အလား ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ထိထိရောက်ရောက် ကစားနေတယ်။ သူ့ရဲ့ ဒီရာသီခြေစွမ်းက ကြွေတက်လွန်းနေတာက ကစားသမားဘဝတလျှောက် အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းအဖြစ် အညွှန်းခံထားရတယ်။ ခံစစ်ကို အလုံခြုံဆုံးဖြစ်စေသလို တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါပြီး ပြိုင်ဘက်အသင်းကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်တယ်။ အောင်မြင်တယ်။ အသင်းကိုဟန်ချက်ညီစေတယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဒုတိယဦးဆောင်ဂိုးကို သူသွင်းယူသွားပုံက မန်စီးတီးကို ငိုက်ကျသွားစေခဲ့တယ်။ လက်ခုပ်တီးချီးကျူးချင်စရာကောင်းခဲ့တယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား မန်စီးတီးလက်ထဲက လုယူဖို့ ယူနိုက်တက် စဉ်းစားနေလား?
ဒီပွဲအပြီးမှာ မန်စီးတီးအသင်းက အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ကနေ ဆက်လက်ဦးဆောင်နေပြီး အဆင့် ၂ နေရာက ယူနိုက်တက်ကို ၁၁ မှတ်ဖြတ်ထားတယ်။ ကစားရမယ့် လက်ကျန်ပွဲက ၁၀ ပွဲကျန်တယ်။ ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ဘောလုံးလောကရဲ့အစဉ်အလာက ရှိနေလို့ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအတွက် မျှော်လင့်စရာဖြစ်နေတယ်။ ပွဲစဉ်ဇယားမှာတော့ မန်စီးတီးက လက်ကျန် ၁၀ ပွဲမှာ ကြီး ၆ ခြောက်ကြီးထဲက ၁ သင်းနဲ့သာ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိတော့တယ်။ မန်စီးတီးဘက်ကကြည့်ရင်တော့ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ ခြေချော်သွားဖို့ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်လွန်းလောက်အောင် အလှမ်းကွာတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ မန်စီးတီးအနေနဲ့ ချန်ပီယံစိတ်ကြီးဝင်ပြီး ပေါ့ပေါ့တန်တန် ကစားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဂွာဒီယိုလာအခက် ယူနိုက်တက်အချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၇၃ မိနစ်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အားထားရတဲ့ တိုက်စစ်မှူး မားကပ်စ် ရက်ရ်ှဖို့ဒ် ဒဏ်ရာကြောင့်ထွက်ခွာခဲ့ရတယ်။ မန်စီးတီးကို အပြိုင်လိုက်ပြီး ဖိအားပေးဖို့ ကြိုးစားလာနိုင်ခြေရှိနေတဲ့ ယူနိုက်တက်အတွက် ထိုးနှက်ချက်တခုဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ အဆိုအရတော့ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်အတွက် ခေတ္တစိတ်သက်သာရစေခဲ့တယ်။ ဒဏ်ရာကို စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်ရသေးပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ရာမဟုတ်ဘဲ အသေးစားထိခိုက်မှုသာဖြစ်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း ပွဲအပြီးမှာဆိုခဲ့တယ်။ ယူနိုက်တက်မှာ ဒဏ်ရာလူစာရင်း အတော်လေးမြင့်တက်လာတာက သတိထားစရာပါ။ ဒါ့အပြင် ယူနိုက်တက်ဟာ လက်ရှိဥရောပထိပ်သီးလိဂ် ၅ ခုမှာ အဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိတဲ့ တသင်းတည်းသောအသင်းဖြစ်လာတယ်။
ယူနိုက်တက်ရဲ့ မှတ်မှတ်သားသား စံချိန်မှတ်တမ်း
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပထမပိုင်းအပြီးမှာ ဦးဆောင်ထားနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ၁၀၃ အထိကို ရှုံးပွဲမရှိဘူးလို့ သိရတယ်။ ပထမပိုင်းနိုင်တဲ့ပွဲတိုင်းမှာ ၉၁ ပွဲနိုင်ပြီး ၁၂ ပွဲကို ပွဲအပြီးမှာ သရေကျထားတယ်။ ဒါကအံ့ချီးလောက်တဲ့ မှတ်တမ်းမျိုးဖြစ်နေတယ်။ နောက်တချက်က ဆိုးလ်ရှားက ယူနိုက်တက်အသင်းသမိုင်းမှာ မန်စီးတီးကို အဝေးကွင်း ၃ ပွဲဆက် နိုင်တဲ့ ပထမဆုံးနည်းပြဖြစ်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပှဲကွိုပွောထားခဲ့တဲ့အတိုငျး အဈတီဟတျမှာ မနျစီးတီးကို အနိုငျယူတဲ့ ဆိုးလျရှား
လေးဂိုးတှခေညျြး ဆကျတိုကျသှငျးပွီး အဆငျ့လေးဝငျဖို့ ယတွာခသြေလား မှတျရတဲ့ စပါးဈရဲ့နိုငျပှဲ